Boky torolàlana 25 amin'ny teny espaniola an'ny rindrambaiko izay tena ilaina amin'ny famolavolana | Famoronana an-tserasera
Nandritra ny taona maro dia nandreraka ny fivoaran'ny teknolojia sy ny rindrambaiko amin'ny ankapobeny. Izany koa dia nafindra tamin'ny tontolon'ny famolavolana izay nitombo ny fanolorana programa ary nohamafisina ny haavon'ny haavon'ny tsirairay mandra-pahatongan'ny fitaovana azo idirana sy intuitive ary koa mahery. Ny sampana famolavolana tsirairay dia nahita ny refiny amin'ny rindrambaiko.
Ho an'ny famolavolana fanovana, Adobe InDesign, ho an'ny famolavolana sy ny sary vongana, Illustrator; hiasa amin'ny sarimiaina sary, Adobe Animate; ho an'ny sarimihetsika video Adobe Premiere ary Adobe After Effects ho an'ny famokarana audiovisual. Ho an'ny volavolan-tranonkala Dreamweaver… Araka ny hitantsika, tao anatin'ny fianakavian'i Adobe ihany no nisy fanamontsanana tena mahaliana. Ireto ambany ireto dia te-hizara aminao ny safidinay Boky fampianarana 25 maimaim-poana amin'ny Espaniôla momba ireo manam-pahaizana ireo hanombohana ny herinandro. Ankafizo izy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Boky fampianarana 25 amin'ny teny espaniola amin'ny rindrambaiko ilaina amin'ny famolavolana
Matías Briones Calzadillas dia hoy izy:
Ok ampitahao ??
Valiny tamin'i Matías Briones Calzadillas
Yaiza Alcay dia hoy izy:
Misaotra anao indrindra!!
Valiny tamin'i Yaiza Alcay
Pili hollunder dia hoy izy:
Ok Adobe no feo
Valiny tamin'i Pili Hollunder
Leticia dia hoy izy:
Misaotra nandefa ireo boky torolalana
Valiny tamin'i Leticia
Nacho ruiz dia hoy izy:
harena ho an'ireo tia famolavolana;)
Valiny tamin'i Nacho Ruiz
Te hanokatra ny rohy photoshop cs6 aho ary manokatra ny CC Help!
Rota dia hoy izy:
tsy manokatra zavatra mihitsy
Mamaly an'i ruth